ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ ၊ နေပြည်တော်မှာ NLD ခရိုင်ရုံး စတင်တည်ဆောက် - Yangon Nation News
(၁၁.၇.၂၀၂၀) ရက်နေ.က ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ ၊ နေပြည်တော် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ခရိုင်ရုံးတည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းခွင်သို့ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင် ဒေါက်တာမျိုးအောင်နှင့် ဦးအောင်ကြည်ညွန့်တို့ သွားရောက် ကြည့်ရှုခဲ့ကြပါတယ်။
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) ရုံးခွဲ ဖွင့်လှစ်ရန် အတွက် နေပြည်တော်တွင် ၁၆ ဧက ကျယ်ဝန်းသည့် မြေကို ငွေ ကျပ် သိန်း ၂၀၀၀ ကျော်နှင့် ဝယ်ယူထားတယ်လို. NLD ပါတီ ဗဟိုအလုပ် အမှု ဆောင် အဖွဲ့ဝင် ဒေါက်တာ မေဝင်းမြင့်က သတင်း မီဒီယာများအား ပြောပါတယ်။
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပါတီ ရုံးများ ဆောက်လုပ်ရန် အတွက် နိုင်ငံ အတွင်းရှိ မြေ လွတ် မြေရိုင်းများနှင့် ပြည်သူပိုင် တိုက်ခန်းများ၊ အဆောက်အအုံများကို အသုံး မပြုရန် မှာကြားထားတယ်လို. လည်းသူကပြောပါတယ်။
အဲဒီ မြေနေရာ အတွက် အသုံးပြုထားသည့် ငွေကြေးဟာ ဒုတိယ အကြိမ်၊ လွှတ်တော်များ စတင် ကျင်းပသည့် အချိန် က စ၍ NLD လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များထံမှ ကောက်ခံထားသည့် ငွေဖြစ် ကြောင်း ဒေါက်တာ မေဝင်းမြင့်က ပြောပါတယ်။
ထို ပါတီ ရန်ပုံငွေတွင် နိုင်ငံတော် သမ္မတနှင့် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် အပါအဝင် NLD နှင့် သက်ဆိုင်သည့် တိုင်းနှင့် ပြည်နယ် ဝန်ကြီးများ၊ ဝန်ကြီးချုပ်များထံမှ လည်း ကောက်ခံထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ထိုသို့ ပါတီဝင်များထံမှ ပုံမှန် ကောက်ခံ ရရှိသည့် ငွေမှာ လစဉ် သိန်းပေါင်း ၂၂၀၀ ခန့် ရခဲ့ပြီး ယင်း ရန်ပုံငွေများထဲမှ တိုင်း နှင့် ပြည်နယ် အဆင့်ကို သိန်း ၇၀၀ ပေးပြီး၊ မြို့နယ် တမြို့နယ်ကို သိန်း ၁၅၀ နှုန်းနှင့် မြို့နယ်ပေါင်း ၁၃၄ မြို့နယ် ပေး ထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း ပေးခဲ့ပြီး ငွေ ကျပ်သန်းပေါင်း ၂၈၅၀ သုံးပြီး ဖြစ်ကြောင်း NLD ပါတီက သိရပါတယ်။
NLD ပါတီရုံးကို ရန်ကုန်မြို့ ဗဟန်းမြို့နယ် ရွှေဂုံတိုင်ရှိ NLD ဗဟို ရုံးချုပ် ရှိပြီး၊ ရုံးခွဲများကို တိုင်းနှင့် ပြည်နယ်များတွင် ဖွင့် လှစ်ထားပြီး ဖြစ်ပြီးယခု နေပြည်တော် ပါတီ ရုံးခွဲကို ထပ်မံ တည်ဆောက်တာဖြစ်ပါတယ်။
Photo Credit – #KoMinThu